Xeerar cusub oo ku saabsan waji-xidhka iyo Ka-baxa Cagaaran laga bilaabo 1da Abriil | JumaMap
Xeerar cusub oo ku saabsan isticmaalka maaskaro iyo ka gudubka cagaaran ( wareegtada Maarso 17, 2022): waa kuwan hal-abuurka ugu waaweyn iyo xeerarka cusub ee dhaqan geli doona laga bilaabo Abriil 1, 2022.
Xusuusnow in 31-ka Maarso xaaladda degdegga ah ee Covid-19 ay dhammaan doonto.
Ilaa Abriil 30, 2022, isticmaalka waji-xidhka FFP2 waa qasab:
meelaha bandhigyada u furan dadweynaha lagu qabto
Goobta shaqada, dhanka kale, way ku filnaan doontaa in la xidho agabka ilaalinta neefsashada (maaha qasab maaskaro FFP2).
Green Pass goobta shaqada
Laga bilaabo 1da Abriil dhammaan shaqaaluhu waxay awood u yeelan doonaan inay galaan goobaha shaqada iyagoo wata Saldhigga Kaaska Cagaaran. Laga bilaabo Maajo 1-deeda, si kastaba ha ahaatee, ma sii ahaan doonto qasab.
Ilaa Diseembar 31, 2022, tallaalku wuxuu ahaanayaa mid waajib ku ah shaqaalaha ku jira mihnadaha caafimaadka iyo shaqaalaha isbitaallada iyo guryaha dadka lagu xanaaneeyo: shaqaalaha aan u hoggaansamin waajibaadkan waxay sii ahaan doonaan in laga joojiyo shaqada.
Kaarka Cagaaran wuxuu ahaanayaa mid waajib ah ilaa Diseembar 31keeda sidoo kale booqdayaasha RSA (guryaha dadka lagu xanaaneeyo), xarumaha caafimaadka iyo waadhka isbitaallada, laakiin hadda ma ahan qasab inaad yeelato suuf taban haddii aad ka bogsatay Covid oo aad haysato Kaas Cagaaran. .
Xannaanada iyo xanaanooyinka, dugsiyada hoose iyo dhexe, iyo dhammaan dugsiyada sare: iyadoo ay joogaan ugu yaraan 4 xaaladood oo wanaagsan, hawluhu waxay sii wadaan joogitaanka, iyo – ardayda ka weyn lix sano – waxaa la saadaaliyay isticmaalka ee waji-xidhka FFP2 muddo 10 maalmood ah laga bilaabo xidhiidhkii ugu dambeeyay ee mawduuca togan. Dhammaan ardayda ku jirta go’doominta caabuqa Covid waxay awoodi doonaan inay raacaan waxqabadka Waxbarashada Fogaanta (DAD) haddii ay haystaan ​​shahaado caafimaad. Baaritaan degdeg ah ama diidmo molecular molecular waa ku filan in lagu noqdo fasalka.
Go’doon iyo karantiil
Laga bilaabo 1da Abriil, qof kasta oo xiriir la yeeshay cudurka ‘Covid’ waa inuusan mar dambe is-karantiilin. Sidaa darteed karantiilkii waa la baabi’iyay laakiin is-ilaalintu waa la xaqiijiyay: waxaad u bixi kartaa oo keliya waxa lama huraanka ah.
Go’doominta waxaa loo xaqiijiyay kuwa u wanaagsan Covid: waa inay guriga joogaan ilaa inta laga helayo wax-ka-qabashada xun.
Wareegtada March 17 ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay:
dhamaadka nidaamka aagagga midabka leh
laga bilaabo 1da Abriil, ku soo noqoshada 100% awoodda goobaha ciyaaraha dibadda iyo gudaha.
PrevPrecedenteDardaaranka Yurub ee ilaalinta ku meel gaadhka ah waa la ansixiyay